China Custom logo sleeve yabasetyhini'S Hoodie PY-WW003 Ukwakha kunye nefektri | IPinyang
Ijezi eqinileyo yamadoda kunye nabasetyhini ijezi yesiko eshicilelweyo ye logo hoodie
Loluphi uhlobo lwelaphu lokukhetha ulwenziwo lwejezi lasebusika? Ulwazi lwelaphu elungelelanisiweyo leHoodi
KwiHoodi eyenziwe ngokwezifiso, kukho iintlobo ngeentlobo zamalaphu esinokuthi sikhethe kuwo emarikeni, kodwa loluphi uhlobo lwelaphu leHoodie elibile ngakumbi kwaye liyaphefumla? T Club ulwenziwo kuya kuthatha ukuba uqonde imeko amalaphu Hoodie kwimarike.
Ilaphu elicwangcisiweyo lejezi- ilaphu lecashmere
ICashmere ngokwayo ayilixesha eliqhelekileyo, kodwa ligama elisetyenziswa kakhulu kumashishini. Isizathu sokuba ibizwa ngokuba yi-cashmere kukuba yi-cashmere eyenziweyo, ke ibizwa ngokuba yi-cashmere, hayi iinwele zewundlu. ICashmere ayibizi njengeenwele zewundlu, kodwa inefuthe elihle lokufudumeza, akukho ngaphantsi kweenwele zemvana. Ke ngoko, isetyenziswa ngokubanzi kwishishini lempahla. Kukhethwa ngabasebenzisi abaninzi ukwenza i-Hoodie. Kukwimfashini ukugcina ubushushu.
Ilaphu lesiko - ilaphu elicocekileyo lekotoni
Umqhaphu ococekileyo wenziwe ngombala womqhaphu. Ifayibha yomqhaphu ine-hygroscopicity elungileyo, umsebenzi opholileyo wokupholisa, unokufumana ukubila kwaye wenze ulusu lutsha. Iimpahla ezenziwe ngomqhaphu ococekileyo zithambile kwaye zikhululekile. Amalaphu omqhaphu asulungekileyo ahlala omile xa uchukumisa, ubunzima bokukhanya, kunye nokungena komoya okungcono. Baziva bepholile emzimbeni kwaye bakulungele ukwenza iimpahla zasehlotyeni. Nangona kunjalo, amalaphu omqhaphu acocekileyo anenye yezona zinto zibalulekileyo, oko kukuthi, ukufunxa ukubila kunye nokungena komoya. Eyona nto iphosakeleyo kukuba kulula ukushwabana.
Ilaphu elenzelwe wena ijezi- uboya obumhlophe bomhlaba
Uboya bePolar luhlobo lwelaphu elinithiweyo. Isakhiwo esincinci esenziwe nge Yuanbao, esalukwe kumatshini omkhulu osisetyhula. Emva kokuluka, ilaphu elingwevu lidaywe kuqala, emva koko ligqitywe ngeenkqubo ezahlukeneyo zokugqiba ezinje ngokulala, ukwenza amakhadi, ukucheba kunye nokuthambisa. Icala elingaphambili lelaphu lixutyiwe, kwaye ingqolowa eshukumayo iyanetha kwaye ixinene, kwaye akukho lula ukuphalaza uboya kunye nepilisi, kwaye icala elingasemva lincinci kwaye lide, i-villi emfutshane, ukuthungwa okucacileyo kunye nokuqina okubuthathaka. Izithako zalo zihlala ziyi-polyester, ziziva zithambile.
Ezi ndidi zintathu zelaphu le-Hoodie zingcono ukubila ukufunxa kunye namalaphu okuphefumla ii-hoodies ezenziwe ngokwezifiso; ngolwazi oluthe kratya malunga nokukhethwa kwamalaphu ehood ezenziwe ngokwezifiso kunye nabahlobo beehoodi ezenziwe ngokwezifiso, nceda unxibelelane nenkonzo yabathengi ekwi-intanethi ngokwezixhobo.
Ijezi emhlophe eyenziwe ngebhondi yenziwe ngefreyimu ye-polyester eyi-50% kunye nekotoni engama-50%. Kuyinto imibimbi ukumelana kwaye banxibe-enganyangekiyo. Inobungqingili obuhle kunye nokuzinza okubonakalayo. Akululanga ukuphalaza kunye nokuma kombane. Indwangu edibeneyo, lilaphu elingqindilili, lihlangene. Inganxitywa ngamadoda nabasetyhini. Unokwenza ngokusesikweni iphethini, umbala kunye nelogo.
Ukusetyenziswa kwemveliso: intengiso, iHoodi, impahla yeqela, ulwenziwo lomntu, njl., Unokwenza umbala, iphethini, ilogo.
Uhlobo loNikezelo: Inkonzo ye-OEM Indawo yokuQala: Jiangxi, China
Igama lebrand: PINGYANGYU Inombolo yeModeli: I-PY-WW003
Uhlobo lwengubo: uphawu lomxube weCotton: UKUPHULELA NGOKUPHELELEYO, Ukulwa ipilisi, ukuNqanda ukuNcipha, Ngaphandle kwekepusi
Izinto eziphathekayo: 50% yePolyester，Iipesenti ezingama-50 zekotoni: ezishicilelweyo
Uyilo: Ixesha leLined: Ekwindla
Uhlobo: Ubude bempahla eqhelekileyo: Abanye Uhlobo lwePateni: Isitayile seSleeve eQinisekileyo: Abanye
Ikhola: V-intamo Ubunzima: 350g
Ubude beSleeve (cm): Iintsuku ezi-7 ezigcweleyo zoku-odola ixesha lokukhokela: Inkxaso
Igama lemveliso: Ukuwa ngokwesiko oku-v-intamo ye-sweatshirt yohlobo lweMveliso: I-sweatshirt yabasetyhini
Amagama aphambili: Abafazi ababhinqileyo ababhinqileyo ngokwesini Isini: Amantombazana amaNenekazi aBasetyhini
Ilogo: Elungiselelweyo Ilogo Uhlobo Loshicilelo: Causal Wear
Inombolo: Ubungakanani beNkonzo ye-OEM ngokobukhulu: Ubungakanani beSiko
Inkonzo: Isiko le-OEM ye-ODM Inkcazo: Uyilo olwenziwe ngokwezifiso
A: Ewe, iiNdalo zethu zabaThengi zineminyaka engaphezu kwama-5 yamava sisebenza kunye neemakethi zefashoni zaseYurophu naseMelika kuyilo, uphuhliso kunye neenkqubo zemveliso.
Q: Malunga nobukhulu kunye nombala.
A: Yamkela ulwenziwo.
A: Imveliso encinci: iintsuku ezingama-5-7 Ukuveliswa kwemisa: 7-15days okanye usekwe kwi-qty yakho.
A: Iimveliso ezigqwesileyo (uyilo oluyingqayizivele, umatshini wokuprinta kwangaphambili, ulawulo olungqongqo lomgangatho)
ukuthengisa ngokuthe ngqo (ixabiso elincomekayo nelikhuphisanayo) Inkonzo enkulu (i-OEM, i-ODM, iinkonzo zasemva kwenkonzo, ukuhanjiswa okukhawulezileyo) Ukubonisana ngoshishino.
Egqithileyo Umbala oqhelekileyo weSweatshirt yabasetyhini i-Sweatshirt PY-WH001
Okulandelayo: Ukutsala okuTshisayo kweMikhono emide yabafazi yeHoody PY-WW004
Ukukhululeka kunye nokuSebenzisa ngokuSasazekayo kwabafazi be-Mid-Length H ...
Ukuprinta ukuHamba okuPhelileyo kweNtwasahlobo yabasetyhini i-Hoodie PY-WW002
Umtya ojiyileyo oMde weSikhono sabafazi seHo ...